musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nhau yeBhola Genius inonzi "Monito". Icho chifukidziro chizere cheGiovani Lo Celso Chikoro Chemwana, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, uye zvimwe zviitiko zvine mukurumbira kubva panguva yaaive achiri HAPANA kusvika paakava VANHU.
Hupenyu nekusimuka kwaGiovani Lo Celso. Mifananidzo Credits: Instagram.
Hungu, munhu wose anoziva kuti iye akanyanya-tarenda nhabvu wepakati ave mutambi-shanduri yeSpurs pasi Jose Mourinho. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeGiovani Lo Celso's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Midfield general Giovani Lo Celso akazvarwa musi we9th waApril 1996 kuguta reRosario muArgentina. Ndiye wechitatu pavana vana akazvarwa kuna amai vake, Sandra uye kuna baba vake, Juan Lo Celso.
Giovani Lo Celso akaberekerwa kuvabereki vanozivikanwa zvishoma nezve. Mifananidzo Credits: Instagram uye PxHere.
Iwe unoziva here kuti Giovani inyika yeArgentina yedzinza rakasanganiswa nemavambo emhuri yeItaly? Akakurira paSarmiento nharaunda muRosario kwaakange aine mwana akazadzwa-mudiki akazadza pamwe chete nemunun'una wake - Francesco uye hanzvadzi mbiri dzakura Luciana & Agustina.
Mudiki Giovani aive nehudiki-hwakazadzwa-hwakakura hwekukura pamwe chete nemunun'una wake Francesco nevamwe vaviri. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kurera mumhuri yepakati-kumashure mhuri muSarmiento muvakidzani, zvakange zvisingagone kuti Giovani asazove mutambi wenhabvu. Imba yaive igarwa naGiovani yaingova mabhuruku mashanu kubva pagomba renhabvu rakakura. Iyo zvakare yaive ne garage yakakura zvakakwana kuti Giovani aite nhabvu nemunun'una wake Francesco.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kufanana nevakuru vemitambo yenhabvu, Giovani akatora matanho ake ekutanga mumakwikwi enhabvu kumakirabhu evevakomana vasati vatamba nechisarudzo chekuti ndeipi nhandare uye ligi kuti atange basa rake rechidiki.
Makirabhu evakomana anosanganisira San Jose, kirabhu yemuno umo basa raGiovani rakatanga mushe asati abatana neArgentina Jorge Griffa academy inozivikanwa yeArgentina kudzidziswa kwemakore maviri.
Akatamba nhabvu dzevakomana panguva yemakore ake ekuumba. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Pakazosvika nguva Giovani agadzirira kutanga basa rake rehudiki, aive nezviuru zvinouya kubva kumatimu epamusoro kusanganisira Chirungu - Everton. Nekudaro, iye aive aine makore gumi nemashanu ekuzvarwa akazvipira kuchikwata chenzvimbo Rosario Central mukuzadzisa kwake kurota kwehucheche.
Kutamba yeRosario Central kwaive kurota kwaakabata kwemakore uye akatarisira kuzadzisa icho. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Paaive kuRosario Central, Giovani akakura mune hunyanzvi uye mukukura paakakura kuburikidza nenzvimbo dzemakirabhu. Muchokwadi, French side PSG yaive nemeso paGiovani kwemwedzi uye akaenderera mberi kusaina tarisiro yebhola mushure mekunge apedza yake yakakura yedare mwaka (2015/2016) yeRosario Central.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Giovani haana kutanga kutamba yePSG achangomusayina. Akakweretwa kudzoka kuRosario Central kuti awane ruzivo rwekutanga-rwemwaka wemwaka wa 2016/2017. Paakapedza chikwereti chake chekwereti, mutambi wepakati akaenda kuPSG uye aive neruzivo zvishoma rwekutamba pamwe nezvakada Dani Alves, Adrien Rabiot, Draxler uye Cavani panguva yemwaka wa 2018/2019.
Paakapedza kubhadhara chikwereti chake, mutambi wepakati akakwiridzana kuenda kuRosario Central ndokuenderera kumusoro. Mifananidzo Credits: Instagram.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti PSG yakanga isina nzvimbo isingagumi yeGiovani. Saka nekudaro, vaive vasina dambudziko rekumukweretesa kuSpain side Real Betis nesarudzo yekutenga. Yaive paReal Betis pasi Quique Setien kuti Giovani akawana fomu uye akasarudza kuita chibvumirano chake chechigarire nekirabhu nezvikonzero zviri pachena (nguva yakawanda yemutambo).
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Pamusoro pebasa rake neReal Betis, Giovani akawana mukurumbira wemuchina wekufunga-gwinha nekukuvadza, kukura uko kunotungamira Chirungu Tottenham Hotspur kuti imusainise pachikwereti chakareba. Nekudaro, muArgentina akatambudzika pakirabhu, kwete nekuda kwekukuvara kwehudyu kwaakanhonga achiri pabasa rekunze. Giovani uyo aivimba naye aive achiri kuyedza kuchengetedza nzvimbo mukirabhu apo munhu wenyika yake Mauricio Pochettino yakatsiviwa ne Jose Mourinho.
Asina kuora mwoyo, Giovani akashanda kuti awane kufarirwa pamberi pe maneja wake mutsva nekuvhura mucherechedzo panguva yekukunda kwaTottenham 4-0 kukunda Red Star Belgrade muEFA Champions League. Hazvina kutora nguva refu asati asimbisa chimiro chake chekuti Spurs anotyisa murairidzi nekurova gonha rekuvhura muuyo 2-1 kukunda Middlesbrough mumutambo weFA Cup.
Mukurumbira akamumbundira mushure mekupa zvibodzwa zvakakosha zvakasimbisa chimiro chake semumwe wevatambi veSpurs anotyisa. Image Chikwereti :TheTelegraph.
Ingori nyaya yenguva chete tisati tamuona pamwe nevamwe vatinoshanda navo munharaunda yepakati, Harry Winks, Tanguy Ndombele, Dele Alli uye Gedson Fernandes famba Spurs kune inotevera chikamu chikuru. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Kure kure neupenyu hwaGiovani Lo Celso hunonakidza hwehupenyu, ane hupenyu hwerudo hunoshamisa hunoitwa hwakanaka nemusikana wake VaMagui Alcacer. Haasi musikana waGiovani chete asi wekushambira muenzaniso, wefizikisi pamwe chete ne kinesiologist.
Nenhoroondo inoshamisa kudaro, hazvishamise kuti Giovani anoda uye anoda musikana wake waakasangana naye makore mazhinji apfuura muRosario. Ukama hwaGiovani naMagui hauna kupa kuti mwana avepo akazvarwa - panguva yekunyora - nyowani haana rudo rwekuita nemwanakomana (mwanasikana) kana mwanasikana (vakaroora) kunze kwemuchato.
Sangana naGiovani Lo Celso Musikana Shamwari yaMagui Alcacer. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Achifambira mberi kuGiovani Lo Celso hupenyu hwemhuri, akakomborerwa kuve nevabereki vanotsigira uye hama. Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yaGiovani kutanga nevabereki vake.
Pamusoro pababa naamai vaGiovani Lo Celso: Juan Lo Celso naSandra ndivo amai vepakati paamai nababa vepaitevedzana. Mipiro yavo mikuru mukuvandudza kweGiovani uye kufambira mberi kwayo kunogara kuri kutsva mundangariro dzake. Saka nekudaro, mudhara wenhabvu anogara achikurumidza kukwereta baba vake nekumuendesa kunodzidziswa. Kana iyewo haakanganwe kucheuka kuti mai vake vaigara vachimukurudzira kuti azvininipise uye agare akatarisa pane rimwe bhora. Vabereki vaGiovani vachiri kugovana hukama hwepedyo naye - panguva yekunyora - uye vari kuedza kuve nechokwadi chekuti anowana zvakanakisa muhupenyu.
Nezvevakoma vaGiovani Lo Celso: Sezvatakambotaura, Giovani Lo Celso ndiye wechitatu mwana akaberekerwa vabereki vake. Ane hanzvadzi mbiri diki dzinozivikanwa dzinonzi Luciana naAgustina pamwe nehama mudiki - Francesco uyo anotamba semutambi pakati weRosario Central panguva yekunyora. Vese vana babamunini vakave neakanakisa ehupenyu hwekutanga-hwakazadzwa hwehupenyu vachiri kukura pamwechete. Vanodawo uye kutsigirana. Vabereki vaGiovani Lo Celso vakabereka vana vanotevera.
Kubva kuLR: Francesco, Giovani, Luciana, Agustina naGiovani zvakare. Mifananidzo Credits: Instagram.
About Giovani Lo Celso hama: Kuenderera mberi kuna Giovani Lo Celso hupenyu hwemhuri hwakawedzera, hapana zvinyorwa zvemadzitateguru ake nemidzi yemhuri, kunyanya vanasekuru nasekuru naambuya nasekuru nasekuru. Saizvozvo ivo babamunini vaGiovani, babamunini uye hama dzemukoma havazivikanwe apo vazukuru vake nanasekuru vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Giovani Lo Celso ndiani? Wakambozvibvunza here nezvekuti chii chinoita kuti Giovani Lo Celso abike? Wakaedza zvakadii kuti uone hunhu hwehunhu hwake? Pano ingori nzvimbo yakakodzera yekupemberera maziso ako pane zvinyorwa zvinoratidzira chokwadi pamusoro peye mutambi wepooni kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake.
Kutanga, Giovani's persona anoratidza maitiro anoratidzwa nevanhu anotungamirirwa naAries Zodiac chiratidzo. Anodisisa, ari nyore, ane moyo wakanaka, ane simba uye haana dambudziko nekuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvinodiwa zve Midfielder uye zvekuseredza zvinosanganisira kushambira, kufamba uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Nguva yakanaka neshamwari zvinoreva zvakawanda kune wepakati. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Nezve Giovani Lo Celso basa rekugadzira mari uye maitiro, anowana mari yakawanda mumabhadharo uye mubairo wekutamba nhabvu yepamusoro yenhabvu apo magumo anobatsira mukukura kwechikwereti chake icho chiri kuramba chichiongororwa panguva yekunyora iyi bio.
Wepakati haasati aonekwa achityaira mota dzinogona kuratidza fungidziro pamusoro pehupenyu hwake hwekumbozorora hupenyu asi kukosha kweimba kana imba yaanogara mairi kuchiri kusazivikanwa. Nekudaro, ane chinhu chekushandisa zororo kunzvimbo dzinodhura Resorts kusanganisira Disneyland Park.
Giovani Lo Celso- Ona uyo akaonekwa aine nguva yakanaka paDisneyland Park. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovani Lo Celso Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kuputira kumusoro kwedu Giovani Lo Celso nyaya yehucheche uye Biography, heano mashoma anozivikanwa kana asina kutaurwa chokwadi nezvake.
Pamusoro pechinangwa cheGiovani: se Bale & Gabriel Jesu, Giovani anopemberera zvakasarudzika zvinangwa zvake nekusimudza ruoko rwake rwerudyi neminwe mashanu yakatambanudzwa. Mukomana wepakati achiri ipapo, anosimudza ruoko rwake rweruboshwe nemunwe akatambanudzwa unonongedza kurudyi rwake. Sekureva kweMidfielder, minwe mitanhatu yese yakatambanudzwa inopa muripo kumunhu wese wemhuri yake yepedyo kusanganisira iye.
Haisiri iyo nguva yose iwe yaunoona iyo yakasarudzika chinangwa mhemberero ine pasi pechinangwa. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Giovani's Italian Citizen: Midfielder ine inoteverwa nhaka yeItaly. Nekudaro, akawana mugari munyika uye ane pasipoti yekuItaly kune izvo. Nekudaro, Giovani zvakangoita Papu Gomez akasarudza kumiririra Argentina.
Fifa Rating: Unoziva here kuti Giovani Lo Celso's FIFA 20 Kuwedzere Maitiro e83 anotaurira zvakanaka huwandu hwebasa raakaisa mukukudziridza hunyanzvi hwake kubva paakatanga kutamba nhabvu yepamusoro-bhiza? Sezvineiwo, iye zvakare ane Anogona iyo Inogona Kukwira kusvika pamakumi masere neshanu. Hapana kuramba chokwadi chekuti zvimiro zvichangoenda chete hapana kwazvino asi kumusoro!
Tarisa uone zvinonakidza uye zvichikwira masitayadhi anotaura zvakanaka nezvekuvandudzwa kwaGiovani Lo Celso mubhora-yepamusoro nhabvu. Mufananidzo Wemifananidzo: Youtube.
Kusvuta uye kunwa: Giovani Lo Celso haana kupihwa kuputa panguva yekunyora iyi bio. Nekudaro, anonwa nekuremekedza nevaanoshanda navo, mhuri uye neshamwari pane zviitiko zvakakosha.
Tattoo: Iyo yepakati - ine kureba kwemamita mashanu, gumi masendimita - inotamba mumutambo weconconscious wevadiki vechidiki vebhola vasina matato panguva yekunyora. Zvisineyi, anogona kushongedza zvirongwa zvekutora hunyanzvi hwemuviri mune ramangwana kana achinge azviratidza seimwe yenyika inosungwa.
Wati wamboona chero Giovani Lo Celso tattoo?… Tizivisei mubhokisi rekutaura. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Chitendero: Vabereki vaGiovani Lo Celso vakamurera mukutevedzera chitendero chechiKristu. Izvi zvinoonekwa mumazita anowanikwa naamai vake Sandra nevanun'una vake - Augustina naFrancesco. Nekudaro, hazvizivikanwe kuti Giovani anoita chiKristu here nekuti iye haasi mukuru pachinamato pane vezvenhau uye panguva yekubvunzurudzwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Giovani Lo Celso Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts